FAQ – Pediasure
PediaSure တွင် မည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါသလဲ။
Pediasure အသစ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ် ၃၇ မျိုး ပါဝင်ပြီး ယခု ထရစ်ပယ်ရှူးဝါးစနစ်အသစ်တွင် ပရိုတင်းအရင်းအမြစ် ၃ခုနှင့်အတူ အာဂျီနင်းနှင့် သဘာ၀ဗီတာမင် ကေ ၂ တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ထားပါသည်။
PediaSure ကို မည်သူများ သောက်သုံးသင့်သလဲ။
Pediasure သည် အသက် ၃နှစ် မှ ၁၀နှစ် အထိ ကလေးများအတွက် သင့်လျော်ပြီး အစာနှင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုတည်း သီးသန့်ဖြစ်စေ တိုက်ကျွေးနိုင်ပါသည်။
Pedisure ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း နှာခေါင်းပေါက်မှ တစ်ဆင့်လည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အခြားအသက်အရွယ်တူ ကလေးများထက် ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးနေသည့်ကလေးများ
ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ကယ်လိုရီနှင့် အာဟာရဓာတ် မြင့်မားစွာ ရရှိရန် လိုအပ်နေသော ကလေးများ
အစားရွေးသော ကလေးများ၊ အစားနည်းသော ကလေးများ၊ အာဟာရဓာတ်ကို စုံလင်အောင် မစားသောကလေးများ (သို့) အာဟာရဓာတ် လုံလောက်မှုမရရှိသော ကလေးများ
လုံလောက်သော အာဟာရဓာတ်ကို မရရှိပါက ကလေးများ၏ အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန် နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သင့်ကလေး အာဟာရလိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
PediaSure ဖော်မြူလာအသစ်တွင် မည်သည့်အရာများ ‌ပြောင်းလဲပါဝင်သနည်း။
PediaSure ဖော်မြူလာအသစ်တွင် အရိုးများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ဗီတာမင် ကေ၂ အပြင် ကလေးများ ကြီးထွားဖွံ့ ဖြိုးဖို့အတွက် အာဂျီနင်းတို့ ပေါင်းစပ်ပါ၀င်ပြီး အခြားသောပါ၀င်ပစည်းများမှာ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။
PediaSure ကို ဘယ်လို ဖျော်စပ်ပြင်ဆင်ပြီး ဘယ်လို သိမ်းဆည်းရမလဲ။
ဖျော်စပ်ပြင်ဆင်ခြင်း – ၂၂၅ မီလီလီတာရှိသော Pediasure တစ်ခွက်ရရှိရန်အတွက် ကနဦးကျိုချက်ထားပြီးသော ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရောက်အောင် အအေးခံထားသည့်ရေကို သန့်ရှင်းသော ခွက် အတွင်းသို့ ၁၉၀မီလီလီတာ ထည့်ပါ။ Pediasure အမှုန့် ၅ဇွန်း (ဗူးထဲ၌ အသင့်ပါသောဇွန်းဖြင့်) ကိုထည့်၍ တဖြည်းဖြည်းပျော်ဝင်အောင် ဖျော်စပ်ရပါမည်။
ဖျော်စပ်ပြီးသော Pediasure ကိုချက်ချင်းသောက်သုံးသင့်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အဖုံးဖုံးပြီး ရေခဲသေတ္တာအတွင်း သိမ်းဆည်းကာ ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်အောင် သောက်သုံးပါ။
PediaSure ကို ဘယ်မှာ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်လဲ။
PediaSure ကို နီးစပ်ရာ ကုန်စုံဆိုင်များ ဆေးဆိုင်များ ဆူပါမားကတ်များနှင့် စတိုးဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
PediaSure Liquid တစ်ဘူးကို ဘယ်လောက်ပေးရပါသလဲ။
Hello xxx, Prices for PediaSure Liquid is ,
PediaSure Liquid -3,200 Kyats
Prices may vary slightly depending on the place of purchase.
Peidasure 3+ Powder ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေသိချင်ပါတယ်။
PediaSure 3+ 400 g – 24,750 Kyats
PediaSure 3+ 850 g -51,150 Kyats
PediaSure 3+ sachet – 2,000 Kyats
Prices may vary depending on the place of purchase.
PediaSure ထုတ်ကုန်များနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ပိုမို သိရှိလိုပါက မည်သို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သနည်း။
သင့်ကလေးကြီးထွားမှုအတွက် အာဟာရလမ်းညွှန် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက Abbott Nutrition Care ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ (၀၉၂၆၀၃၅၆၂၆၂) ကို တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့အထိ မနက် (၈ ခွဲ မှ ညနေ ၅ ခွဲ) အထိ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။